Hoyga | MRU MEDIA
Ogeysiiska Isticmaalka Cadaalada ah
Meteorites-yadani waxay ka kooban yihiin dhammaan qaybaha dhismaha DNA-da
Seeftii Codka Shiineeska ee laga helay Joorjiya waxay soo jeedinaysaa in Shiinuhu u safraan Waqooyiga Ameerika
Qoraalada Sumerian iyo Baybalka waxay sheeganayaan in dadku noolaayeen 1000 sano kahor daadka weyn: run ma tahay?
Anteeno qadiimi ah oo laga helay gunta hoose ee badda Antarctica: Eltanin Antenna
Dhagaxa Ingá: Farriin qarsoodi ah oo ka timid ilbaxnimooyinkii hore ee horumarsanaa?
Dhagaxii hore ee Al-Naslaa ma waxaa lagu jaray “leysar shisheeye”?
Sirta Hyperborea - Saynisyahannadu ma hore u heleen ilbaxnimo Arctic oo dahsoon?
Saynis yahanadu waxay sheeganayaan inuu jiro adduun kale oo ku hoos jira barafka Antarctica
Xolotl - Eeyaha Eebbe ee khuraafaadka Aztec ee u horseeda kuwa dhintay dhulka hoostiisa
Qalfoofka Atacama - Oo dhererkiisu yahay 15cm oo ah hooyada aadanaha oo dhammaystiran
Pedro: Hooyo buur oo dahsoon
Dadka asaliga ah ee Mareykanka ah waxay ku andacoodaan Buuraha Pryor inay hoy u yihiin dadka yaryar ee qarsoodiga ah (hobbit-like)!
Farshaxanka qadiimiga ah ee laga helay Meksiko waxay caddayn doontaa xiriirka Mayan ee shisheeyaha
Naxdin leh, yaab leh, iyo qaar aan la xalin: 44 ka mid ah geeridii aan caadiga ahayn ee taariikhda
Daruuraha Daruuraha: Awoodda dahsoon ee dhaqanka lumay ee Chachapoya
Qalcada Houska: Sheekada "albaabka cadaabta" maaha mid loogu talagalay kuwa qalbi jabay!
Saynisyahannadu waxay ogaadeen nidaam la yaab leh oo ah lix meerayaal 200 sano oo iftiin ah
Maqnaanshaha daloolka madow 10 bilyan oo jeer oo ka badan qorraxda
Saynisyahannada raadinaya shisheeyaha waxay ogaadaan calaamadda ET dahsoon ee Proxima Centauri
Qarsoodiga Tunguska, meteorite -ka ku dhuftay Siberia isagoo wata awood 300 oo bambooyin atom ah oo aan raad lahayn!
Qarsoodiga Mars wuxuu sii qoto dheer yahay iyada oo astaamaha radar -ka aan caadiga ahayn laga helay inaysan ahayn biyo: Maxaa ka soo baxaya meeraha cas?
Naxdinta 'tijaabada hurdada Ruushka'
The Pitoni Sky Stones: Miyey soo booqdeen Galbeedka Afrika kumanaan sano ka hor?
Dhinacyada Klerksdorp - Bilyan sano dhagaxa qariibka ah ee Ottosdal
Waayitaankii Tara Calico: 3 sano ayaa ka soo wareegtay laakiin sirta jirran ee ka dambaysa sawirka “polaroid” weli lama xallin
Mpuluzi Batolith: 200-milyan oo sano jir 'rag weyn' ayaa laga helay Koonfur Afrika
Gil Pérez - ninka dahsoon ee la sheegay in laga soo tebiyey Manila una socday Mexico!
Dhimashadii dahsoonayd ee Karen Silkwood: Maxaa runtii ku dhacay bayaankii Plutonium?
Dhimashadii dahsoonayd ee Stanley Meyer - Ninkii ikhtiraacay 'baabuur biyo ku shaqeeya'
Wiilka Sanduuqa ku jira: 'Ilmaha aan la aqoon ee Ameerika' weli lama aqoonsan
Raad-raacyada derbiga: Ma dinosaurs-yadu dhab ahaantii waxay fuuleen jararka Bolivia?
Dhagaxa dheellitirka ee Kummakivi iyo sharraxaaddiisa aan la filaynin ee sheeko-xariireedka Finnishka
Hel ogeysiisyada ugu wanaagsan ee isbuuc walba soo baxa.
Markaad calaamadiso sanduuqan, waxaad xaqiijineysaa inaad akhriday oo aad oggolaatay shuruudaha adeegsiga ee la xiriira kaydinta xogta lagu soo gudbiyey foomkan.
© XUQUUQDA MRU MEDIA | 2017-2022
Waxaan u isticmaalnaa kukiyada websaytkayaga si aan kuu siino waayo -aragnimada ugu habboon annagoo xusuusan dookhyadaada iyo booqashooyinka soo noqnoqda. Markaad sii waddo daalacashada bartayada, waxaad oggolaatay adeegsiga dhammaan cookies -ka.
Read MoreXir & Aqbal ⟶